ဒေါင်းလုပ် Counter Strike 1.6 | Counter-Strike 1.6 website ကို download လုပ်ပါ
Counter-Strike 1.6 အခမဲ့ download:
Counter-Strike 1.6 ၎င်းသည်စွန့်စားမှုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပြည့်နေသောကြောင့်စိမ်းလန်းသောကမ္ဘာမြေတွင်လူကြိုက်အများဆုံး၊ ဖျော်ဖြေမှုနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂိမ်းနှစ်သက်သူတိုင်းကို download လုပ်ရန်အိပ်မက်ဖြစ်သည် CS 1.6 သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာတွေမှာအခမဲ့သုံးပြီးစစ်တိုက်ပါ။ နိုင်ငံခြားဖိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှ download လုပ်ရန်သင့်တော်သော website တစ်ခု CS 1.6 လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါ။ သင်ကဂိမ်းကစားတာကို ၀ ါသနာပါတယ်ဆိုရင် counter-strike 1.6 နှင့်အခမဲ့ download ရယူရန်သင်နေရာမှန်၌ရှိနေသည်။ အခမဲ့ download ရယူရန်သင်ဤနေရာသို့သွားစရာမလိုပါ CS 1.6မရ။ ငါတို့ကမင်းကို download လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေပေးထားတယ် CS 1.6 အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဒီဆိုက်မှာဗားရှင်းအားလုံးကိုသင်အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်ပါတယ် Counter-strike 1.6 အခမဲ့ ဟုတ်သည်၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကိုသင် download လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည် CS 1.6 အပေါ်မှ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက် ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့်ငွေမဖြုန်းဘဲဂိမ်းကိုခံစားပါ CS 1.6တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကစားသူအများအပြား CS 1.6 ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သောအခြား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အများစုသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော junk ဖိုင်များနှင့်အတူဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းများရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ဂိမ်း CS 1.6 ၏မူရင်းမိတ္တူနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။ ထို့အပြင်ငါတို့သည်မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပြီးမင်းအတွက်လွယ်ကူစေရန် CS 1.6 ၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချထားသောကြောင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဂိမ်းများကိုထိခိုက်စေမည့်အပိုဖိုင်တွဲများနှင့်အစီအစဉ်များမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးရုံမကပါ CS 1.6 အခမဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ဤဂိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသစ်သောကစားသူအသစ်များ (သို့) ကစားသူအသစ်များအားလမ်းညွှန်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များပေးခဲ့သည် Counter-strike 1.6မရ။ ငါတို့သည်သင်အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်ရန် website တစ်ခုဖြစ်သော csdownload.net ကိုငါတို့ဖန်တီးပြီးပြီ CS 1.6 ဂိမ်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မည်သို့ download လုပ်ပုံ၊ ၎င်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းပုံ၊ ကစားပုံကိုလေ့လာပါ CS 1.6.
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခမဲ့နှင့်ရေနွေးငွေ့မဟုတ်သောဗားရှင်းကိုပေးသည် CS 1.6 အလွန်မြန်သော download speed၊ နောက်ဆုံးပေါ် compression နှင့် instillation algorithms ပါသော download သင် download လုပ်ပြီး install လုပ်နိုင်လိမ့်မည် CS 1.6 ဤ website တွင်အမှားအယွင်းများ၊ အမှားအယွင်းများ (သို့) game crush များမပါဘဲ Windows (XP, 7, 8, 8.1 နှင့် 10) အားလုံးအတွက်ဗားရှင်းများနှင့်ထုတ်ဝေမှုများအားလုံးအဆင်ပြေလွယ်ကူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံး
ဒေါင်းချင်ရင် Counter-Strike 1.6ဂိမ်းကိုအခမဲ့ရသော်လည်းသင်မည်သို့ download လုပ်ရမည်ကိုမသိပါ CS 1.6 မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာမှာမင်းအဲဒါကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုတာထက်ငါတို့ကမင်းကိုကူညီဖို့ဒီမှာရှိတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခမဲ့ download ၏ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကိုပေးသည် CS 1.6-ဂိမ်း။ ငါတို့သည်သင်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သော download link တစ်ခုကိုမင်းကိုပေးထားသည် CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှ၎င်းကိုသင် download လုပ်နိုင်ရန်ဤ website တွင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် CS 1.6 သင်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသောအဆင့်အချို့ကိုလိုက်နာရန်သာလိုအပ်သည်။ အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်နားလည်နိုင်ရန်အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာဖတ်ပါ CS 1.6
ကိုနှိပ်ပါ Counter-Strike 1.6 free download ခလုတ်ကိုအပေါ်မှပေးထားပါ
ထို့နောက်သင်အခမဲ့သိမ်းဆည်းလိုသောသင်၏ကွန်ပျူတာရှိတည်နေရာကိုရွေးပါ CS 1.6ဆက်တင်များ
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည် CS 1.6 website မှသင်၏ကွန်ပျူတာသို့ ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းသည်သင်၏အင်တာနက်မြန်နှုန်းပေါ်မူတည်သည်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသောအခါ CS 1.6installation ဖိုင်ပြီးပါပြီ၊ သင် install လုပ်ထားသောဖိုင်တွဲသို့သွားပါ
installation လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါက end ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
သင်ဒေါင်းလုပ်ချပြီးပြီ CS 1.6 အခမဲ့ ယခု၎င်းကိုဖွင့်ပြီးဂိမ်းကိုခံစားပါ။
အရင်တုန်းကလူတွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့ပိုက်ဆံပေးရတယ် Counter-Strikeယခုမူချွင်းချက်မရှိဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့ download လုပ်ပါ CS 1.6; ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပထမ ဦး ဆုံးသေနတ်သမားအမျိုးအစားဂိမ်း၏မည်သည့်ဗားရှင်းနှင့်မဆိုအလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်သည်။ သင်အပါအဝင်ကွဲပြားသောဗားရှင်းများကိုရှာဖွေနေသည် Counter-Strike 1.6 CSGO စာစောင်၊ Counter-Strike: ဟယ်လိုမုဒ်၊ CS 1.6 မူရင်းဗားရှင်း၊ CS 1.6: PROCS RAR ဗားရှင်း၊ CS 1.6: XTCS ဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6 ခေတ်သစ်ပုံစံ (သို့) အခြားဗားရှင်း (သို့) ထုတ်ဝေမှု၊ သင်ဤ website မှမည်သည့်ကန့်သတ်ချက်များသို့မဟုတ်အခြားအဆင်မပြေမှုများမပါဘဲ၎င်းကို download လုပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်အခမဲ့ဗားရှင်းကိုမဆိုနှိပ်ပါ CS 1.6 သင် download လုပ်ချင်သောခလုတ်ကို နှိပ်၍ သင်၏ကွန်ပျူတာ၌ဂိမ်းတစ်ခုရယူရန်ဤ website တွင် malicious script များနှင့်ဖိုင်များကိုအစွမ်းထက်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။
ဗားရှင်းအားလုံး Counter-Strike (CS 1.6 Warzone၊ CS 1.6 မူရင်း၊ XTCS နောက်ဆုံး၊ CS: GO mod၊ Source edition စသည်) Window 95, Window 98, Window 2000, Window 7, Window 8, Window 8.1, Window XP, Window 10 စသည့် Microsoft ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်တွက်ချက်နိုင်သည်။ သင် Windows မဟုတ်သောအခြား operating system ကိုသုံးလျှင်၊ သင်ဂိမ်းကစားရန်နှင့် Microsoft ကစားနေစဉ်အမှားများနှင့်အနှောင့်အယှက်များကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ သင့်ကွန်ပျူတာမှာ Microsoft operating system ရှိပြီးသားဆိုရင်သင်မျှော်လင့်ထားသလိုမဟုတ်ရင် download button ကိုသွားပါ Counter-Strike 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ site တွင်အခမဲ့ ရယူ၍ သင်၏ CS: 1.6 ကိုအခမဲ့ download ရယူပါ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှအခမဲ့သင်ကစားရန်အနည်းဆုံးကွန်ပျူတာစနစ်အကြံပြုထားသောကွန်ပျူတာလိုအပ်ချက်များကိုသိရန်လိုအပ်သည် Counter-Strike 1.6-ဂိမ်း။ မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်ကဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ရနိုင်မလား CS 1.6 မည်သည့်နှောင့်နှေးမှုသို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်မှမရှိဘဲကစားပါ။ မသိဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူးအလကားပါ Counter-Strike 1.6game install လုပ်ခြင်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များအနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောဂရပ်ဖစ်ကတ်များနှင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်ထူးခြားသောသတ်မှတ်ချက်များလိုအပ်သောလေးလံသောဂိမ်းမဟုတ်ပါ။ exe ဖိုင်အရွယ်အစားအတွက် CS 1.6 ကွန်ပျူတာ hard drive ၏ ၂၅၀ MB သာကြာသည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်ပြီး၎င်းသည်သင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသောအခါသင်၏ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုးတက်မှုကိုမထိခိုက်စေပါ Counter-Strike 1.6 သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်မချခင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ် CS 1.6 အခမဲ့ ကစားပြီးပြီဆိုရင် CS 1.6 သင်၏ကွန်ပျူတာ၌နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ၊ သင်၏ကွန်ပျူတာ၌အနည်းဆုံးလိုအပ်သောအသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များရှိပြီးသင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့်ကစားရန်အခက်အခဲရှိလျှင်၎င်းကိုဆိုလိုသည်။ CS 1.6 မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာက free download နဲ့ယှဉ်ရင်မင်းသိဖို့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ် CS 1.6 ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ။ ကွန်ပျူတာအတွက်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များ CS 1.6 CPU: 0,8 GHz, အခမဲ့ Hard Disk-650 MB, RAM (Random Access Memory)- 128 MB
ဂိမ်းကစားရန်အတွက်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင် 512 MB RAM (သို့) ထိုထက်မကရှိရမည်။
သင့်ကွန်ပျူတာ၌အနည်းဆုံး ၇၀ MB hard disk ရှိရမည်
128 MB ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာထားရမယ်
ကစားရန်သင့်တွင်မောက်စ်နှင့်ကီးဘုတ်ရှိရမည် CS 1.6ဒါပေမယ့်မိုက်ကရိုဖုန်းကရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်
အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရဖို့ CS 1.6 သင့်တွင် Microsoft Windows operating system တစ်ခုရှိရမည်။
အဘယ့်ကြောင့် download လုပ်သင့်သနည်း Counter-Strike 1.6 ငါတို့ website ကနေ
ပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့တုန်းကအစမှာ var CS 1.6 အခမဲ့ download အများကြီးမရသော်လည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ developer များ၏ Counter-Strike 1.6 non-steam 1.6 game-free installation file ကိုတည်ဆောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်အခုအခမဲ့ download လုပ်နိုင်တဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်တွေ့နိုင်ပါတယ် CS 1.6-ဂိမ်း။ CS game ချစ်သူများအတွက်သူတို့အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်သော website တစ်ခုကိုရှာရန်မှာခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည် Counter-Strike 1.6 မည်သည့်အန္တရာယ်ရှိသောဗိုင်းရပ်စ်၊ ဖိုင်များ၊ နှောင်ကြိုးများ၊ ကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အခြားမလိုအပ်သောဖိုင်များမပါဘဲအခမဲ့ဖြစ်သည်။ download လုပ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ website တစ်ခုကိုရှာရမယ် Counter-Strike 1.6မရ။ free download ရယူနိုင်သော site အများစု Counter-Strike 1.6 ကစားခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေရုံသာမကနိုင်ငံခြားဖိုင်အမျိုးအစားမျိုးစုံရှိသည် CS 1.6 ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့်မင်းရဲ့ system ကိုထိခိုက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်
ငါတို့ website တွင် https://csdownload.netနောက်ဆုံးပေါ် CS download file 1.6 ကိုအခမဲ့သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ငါတို့မှာ link တစ်ခုပေးထားတယ် CS 1.6 မကောင်းသောဖိုင်များအားလုံးမှအလွန်အကာအကွယ်ပေးပြီးအခမဲ့ဖြစ်သောသင်အတွက် download လုပ်ပါ။ CS 1.6ကျွန်ုပ်တို့၏ site ရှိ client သည်သင်သိနိုင်သောနှေးကွေးသော hack နည်းလမ်းများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ site csdownload.net မှ download လုပ်နိုင်သည် CS 1.6 မကောင်းသောဖိုင်များနှင့် script များအားအစွမ်းထက်သောကာကွယ်မှုနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းဖြင့် Counter-Strikeကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှတိုက်ခိုက်ပါ၊ သင်သည်မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမဆိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ထို့အပြင်သင်ထုတ်ဝေသောအဟောင်းနှင့်အသစ်ထုတ်ဝေမှုအားလုံးကိုသင် download လုပ်နိုင်သည် Counter-Strike 1.6 ဒီ site ကနေ ထုတ်ဝေမှုအသစ် Counter-Strike 1.6 XTCS ဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6: မူရင်းဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6 PROCS ဗားရှင်း၊ CS: GO Edition စသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ရနိုင်သည်။ ဒီဆိုဒ်အတွက်ကောင်းတဲ့ link တွေကိုသင်အလွယ်တကူရှာနိုင်ပါတယ်။ မင်းတကယ်ဝါသနာပါရင် CS 1.6 download ဘာကိုစောင့်နေတာလဲ။ ပေးထားသော CS download-free ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ သင်၏ဂိမ်းကို download လုပ်ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်ကစားခြင်းကိုပျော်မွေ့ပါ။
CS 1.6 သည် CS ဂိမ်းများကိုအဘယ်ကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံး download လုပ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။
CS 1.6ဗားရှင်း Counter-Strike ၎င်းတွင်၎င်းသည်အဟောင်းဗားရှင်းထက်ထူးခြားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစေသောဆွဲဆောင်နိုင်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်လူကြိုက်များသည် Counter-Strikeမရ။ ဤဗားရှင်း Counter-Strike ကစားသမား၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်အများပြည်သူအတွက်အထူးပရိုဂရမ်မာများကတီထွင်သည်။ Counter Strike multiplayer နှင့် single player modes နှစ်ခုလုံးရှိသည်။ developer များသည်တောက်ပသောနည်းဗျူဟာဒိုင်းလွှား၊ crosshairs များနှင့် backend updates များစွာပါ ၀ င်သောဗားရှင်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကစားသူများသည်ဗားရှင်းအသစ်တွင်ဓားများ၊ သေနတ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ စက်သေနတ်များနှင့်ဗုံးပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များရနိုင်သည်။ CS 1.6မရ။ ကစားသမားများသည်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်းလက်နက်များ ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာနိုင်သည်။ ဤလက်နက်များသည်တကယ့်စစ်ပွဲတွင်သုံးသောစစ်မှန်သောလက်နက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤလက်နက်များသည်အသံအေးပြီးကစားသမားများကိုစွဲမက်စေသည်။
ဗားရှင်းအသစ်များ Counter-Strike အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များ၊ စံပြပုံစံကောင်းများ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့်သွက်လက်သောအသံများရှိသည်။ အထက်ပါမြေပုံများ CS 1.6 အခြားမည်သည့်ဗားရှင်းထက်မဆိုများစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတိုးတက်လာသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ၊ CS 1.6 ဆေးများသည်လေးလံသောကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုမလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်လေးလံသောဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းအသေးဆုံးသတ်မှတ်ချက်များပါသောမည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်မဆိုဂိမ်းကိုလွယ်ကူစွာကစားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Microsoft Windows ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
ဖြည့်စွက်ကာ, Counter-Strike ၎င်းသည်၎င်းတို့အားနေ့စဉ်ဘ ၀ ၌သူတို့၏ပြဿနာများကိုမေ့ပစ်ရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများမှဂိမ်းကစားခြင်း၏မတူကွဲပြားမှုသို့ကူးပြောင်းစေသောကြောင့်လူတို့တွင်လူသိများသည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကစားရန် CS 1.6 သူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်အတူအပျက်သဘောဆောင်သောအတွေးများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးလူတို့ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဘာသာပြန်ဂိမ်းနှင့်စကားပြောခြင်းသည်ကစားသူများအားဒဏ္ာရီဆန်သောလုပ်ရပ်များ၏အင်္ဂါရပ်များကိုခံစားစေသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကြောင့် CS သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော်ကြားမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးလူများသည်အားလပ်ချိန်၌ဤဂိမ်းကိုကစားရန်နှစ်သက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံစိတ်ချရသော download link ကိုပေးအပ်ခြင်းဖြင့်ကူညီရန်ဤနေရာတွင်ရှိသည် CS 1.6 အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဒီမှာသင်လုပ်နိုင်တယ် ဝန် အာဗနာ counter-strike 1.6 အခမဲ့
ဤစာမျက်နှာတွင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒေါင်းလုပ် CS 1.6 ပြည့်သော install ဗားရှင်း။ ရရှိနိုင်တဲ့တစ်ခုရှိပါတယ် ဒေါင်းလုပ် XTCS ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် -သပိတ်မှောက် 1.6 ဗားရှင်း အခမဲ့မရ။ XTCS 1.6 Final Release 2011 သည်နောက်ဆုံးနှင့်ခေတ်အမီဆုံးဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Counter Strike 1.6မရ။ ဤဗားရှင်းအသစ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံများပါ ၀ င်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များကြောင့်ဂိမ်းသည်ယခင်ဗားရှင်းများထက်များစွာပိုမိုကောင်းမွန်သည် CS 1.6မရ။ ဒီဂိမ်းကို Windows (Operating System) အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ အရေးကြီးဆုံးအရာသည် Windows ဗားရှင်းအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Counter Strike ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးပစ်ခတ်မှုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ CS တွင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများ၊ အရည်အသွေးမြင့်မြေပုံများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များပါရှိပြီး၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးသေနတ်ပစ်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တန်ပြန်ဖြစ်သည် inga သပိတ်မှောက် ရနှေးငှေ့ ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းနေဆဲဖြစ်ကြသည် မြင့်သည်
ဒီနေရာမှာမင်း download လုပ်ဖို့ link တစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ် counter-strike 1,6 install file ။ သို့သော် PC အတွက်ဤ counter strike download သည်မည်သည့်မြေပုံ၊ အသံများနှင့်အခြားအပိုတပ်ဆင်မှုများမပါ ၀ င်ပါ။
သင်အားသွင်းချင်လျှင် အာဗနာ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် 1,6 အခမဲ့ , ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာတွင်ခလုတ်တစ်ခုရှိသည် ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ်6အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်
ကိုနှိပ်ပါ ဒေါင်းလုပ် cs6နှင့် စတယ် ဝန် အာဗနာ
ဒေါင်းလုပ် ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် strike ဖိုင်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းဖိုင်ကိုမသိမ်းမှီ (သင်၏အင်တာနက်အမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍) မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာကြာသည်။
installation ဖိုင်ကို (installation) ဖွင့်ပြီး installation အပြည့်အစုံ counter counter6ကိုဖွင့်ပါ
တပ်ဆင်မှုအဆင့်ပြီးဆုံးသွားပါကသင်၏ desktop ပေါ်ရှိ counter strike game shortcut ဖိုင်ကို စတင်၍ cs6ကိုစတင်ပါ
cs installation file နှင့်အတူ browser ထဲတွင်အတူတူဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းထားသောအပိုပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များမရှိပါ။ ဤသည်မလိုချင်တဲ့အခြား applications များနှင့်အတူရိုးရှင်းတဲ့တိုက်ရိုက် download link ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Counter-Strike 1.6install file သည် game အပြောင်းအလဲများမှကာကွယ်ထားသည်၊ single player game mode အတွက် bots (CPU player) ရှိပြီး game server များကိုရှာဖွေရန် server server အလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် ဒေါင်းလုပ် ပြတင်းပေါက် 10 သည်အရည်အသွေးမြင့် cs 1.6 ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပြissuesနာများ (သို့) အမှားများမရှိပါ။
မှတ်စု: သင်အားသွင်းနိုင်သည် ner ကောင်တာ သပိတ် 1.6 pc အတွက်အခမဲ့ download လုပ်ပါ။ သို့သော်သင်ပြုလုပ်ပါကမူရင်းနှင့်မိတ္တူကူးယူထားကြောင်းသင်ပြောဆိုသည် non- ရေနွေးငွေ့ကောင်တာ သပိတ်မှောက် ဒေါင်းလုပ်မိတ္တူသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် တရားဝင်သည် တန်ပြန်ဝေမျှဖို့ download ဒေါင်းလုပ် အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် pc သည်။
အတွက် det ဒီမှာဂိမ်းသဟဇာတကွန်ပျူတာစနစ်လိုအပ်ချက်ရှိသည်ဖို့အကြံပြုသည်။ အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးသောစနစ်များမှာ Windows 10၊ Windows 8 သို့မဟုတ် 8.1, 7, XP နှင့် 2000, ME, 98, 95 တို့ဖြစ်သည် ကောင်တာ hits ပြည့်သော ဂိမ်း download အလွယ်တကူသူတို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်။
cs တပ်ဆင်မှုအတွက်အခြားအရေးကြီးသောလည်ပတ်မှုစနစ်လိုအပ်ချက်များ -
CPU clock speed၊ clock frequency 1200 GHz နှင့်အထက်။
512 MB RAM or
128 MB ဂရပ်ဖစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော။
750 MB အခမဲ့ hard disk ကိုနေရာ။
Mouse နှင့် keyboard တို့ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်မိုက်ကရိုဖုန်းလည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ဒီအပိုင်းမှာတော့ CS သမိုင်းအကြောင်းပြောပါ့မယ်။ တန်ပြန်သပိတ်သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Minh“ Gooseman” Le နှင့် Jess Cliffe တို့၏ Half-Life ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့သည့်အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်ပထမဆုံးလူသေနတ်သမားဖြစ်သည်။ Counter-Strike Microsoft Windows platform တွင် Valve ကဖြန့်ချိခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲဒီဂိမ်းဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနာမည်အကြီးဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ ဒါကအွန်လိုင်းမှာမြန်ပြီးအဖွဲ့လိုက် ဦး တည်တဲ့ကစားနည်းတစ်ခုပါ၊ ကစားသမားများသည်အကြမ်းဖက်သမားများသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်သမားများကိုတန်ပြန်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နှစ်သင်းစလုံးသည်သင်အနိုင်ရသည်အထိအပြန်အလှန်တိုက်စစ်ဆင်ကစားသည်။ ရန်လိုသောအဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးကိုသတ်ရန်စီမံသောအဖွဲ့သည်အနိုင်ရသူဖြစ်လာသည်။ ဒုတိယအချက်မှာကစားရန်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများရှိသည် Counter-Strikeလုပ်ကြံမှု၊ ဓားစာခံကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ဗုံးရှင်းလင်းရေး
ထို့အပြင်ဂိမ်းတွင်မြို့ပြ၊ အာတိတ်၊ တောနက်နှင့်သဲကန္တာရကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်များ၌နေရာများစွာယူနိုင်သောမြေပုံများစွာရှိသည်။ ဒါကကစားသမားတွေကိုသူတို့ကစားချင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတယ်။ စတင်ထုတ်လုပ်ကတည်းက Counter-Strike 1.6 ဂိမ်းမှမြေပုံများကိုပေါင်းထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းမရှိပါ။
ကစားသမားသည်ဂိမ်းတွင်ရှိသည့်ကွဲပြားသောလက်နက်များမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကစားသမားများသည်ဓားမှသည်သေနတ်များနှင့်စက်သေနတ်များအထိလက်နက်အမျိုးမျိုးမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ လက်နက်ရွေးချယ်ရာတွင်ကစားသမားသည်လက်နက်များမည်မျှကျေနပ်အားရကြောင်းပြန်လည်စဉ်းစားသင့်သည်။ လက်နက်ရွေးချယ်ရန်အခြားအကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းသည်ကြည့်ကောင်းသည် (သို့) အေးလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားစံသတ်မှတ်ချက်များမှာစစ်မှန်သောတိုက်ခိုက်ရေးအခြေအနေတွင်မည်သည့်လက်နက်များကိုအသုံးပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်သရုပ်မှန်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး Counter strike ဗားရှင်းများအနက်၊ Counter-Strike 1.6ဂိမ်းသည်အဓိကအကြောင်းအရာ update ဖြစ်ပြီးဗားရှင်းနံပါတ်သည်ယခုအလွန်ရေပန်းစားနေပြီးမူရင်းဂိမ်းကိုအခြားစီးရီးများနှင့်ခွဲခြားရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဒီမှာမင်းအလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ် ဝန် အာဗနာ en ဂိမ်း setting အဘို့ ကွန်ပျူတာနှင့်ဂိမ်းကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပါ။
လောလောဆယ်ဖြစ်နေပါတယ် CS 1.6 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံး CS ဂိမ်းဗားရှင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအသီးသီးမှလူတို့တွင်အတွေ့ရများဆုံးဖြစ်သည်။ ယခုပင်လူများသည်ဤဂိမ်း၌ပြိုင်ပွဲများကိုစီစဉ်သည်။ သင်ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် https://www.game.tv/find-tournaments/-counter-strike-1.6-tournaments
မြင်ကွင်းနှင့်ကျန်းမာရေးကို HLTV တွင်ထည့်သွင်းထားသည်
စ၍ Counter Strike 1.6 ကမ္ဘာပေါ်တွင်နာမည်အကြီးဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ကွဲပြားသောပြုပြင်မွမ်းမံမှုများနှင့်ဗားရှင်းအသစ်များစွာရှိသည်။ ဂိမ်းဂရပ်ဖစ်များ၊ ချွတ်ယွင်းမှုများနှင့်အခြားအရာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို၎င်း၏ကျော်ကြားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဗားရှင်းအသစ်များသို့ပုံမှန်ပြုလုပ်သည်။
ဂိမ်းကတကယ်ကိုဟောင်းနွမ်းနေပေမယ့်လူကြိုက်များမှုဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားနေပါတယ်။ လူတို့သည်ဗားရှင်းအသစ်မျှသာမဟုတ်ဘဲဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေကြသည် cs ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်တွေ၊ ဒါပေမယ့်အဟောင်းတွေလည်းပါပါတယ်။ CS 1.6 လူကြိုက်အများဆုံးဒေါင်းလုပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် CS ဂိမ်း ။ ဤနေရာတွင်သင် download လုပ်နိုင်သည် အာဗနာ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် ရနှေးငှေ့ အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ် သင်ထိုသို့မပြုလုပ်သေးပါက၊ အထက်ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ဒီမှာမင်းနောက်ဆုံး XTCS ထဲကတစ်ခုကို download လုပ်နိုင်ပါတယ် counter-strike 1.6 နောက်ဆုံးဗားရှင်း
download လုပ်ထားတဲ့ disk ကိုသင်ဖတ်နိူင်တယ် သပိတ် 1.6 အခမဲ့ ဖိုင်ဖော်ပြချက် ငါပြည့်နေတယ် ဗားရှင်း ဤနေရာတွင်။
စာရေးသူ - XTCS အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး Valve Software
Publiceringsgrupp: XTCS အဖွဲ့
ဂိမ်းစနစ်များ: ကွန်ယက် (အင်တာနက်၊ ဒေသဆိုင်ရာကွန်ယက်၊ စက်ရုပ်တစ် ဦး ချင်း)
Counter strike 1.6 ဒေါင်းလုပ် ပြည့်သော ဗားရှင်း ပုံမှန်မြေပုံများ၊ အသံများနှင့်မော်ဒယ်များသည်ဂိမ်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤ cs တွင်ထည့်သွင်းထားသော၊ ပြောင်းလဲထားသောအသံသို့မဟုတ်မြေပုံအသစ်များမရှိပါ အခမဲ့ installation ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ ။ Moded Counter strike version များကိုလည်းဤနေရာမှကူးယူနိုင်သည် https://csdownload.net/counter-strike-1-6-indir/
အကယ်၍ သင်ပြင်ဆင်ထားသောမြေပုံများ၊ အသံများ၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် attribute များကိုဂိမ်းတွင်သင်လိုချင်လျှင်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်လိုအပ်သောမြေပုံများ၊
XTCS ကို download လုပ်လိုလျှင် Counter-strike 1.6 အခမဲ့သင်အခမဲ့ download XTCS ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 အထက် ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ XTCS Counter-strike 1.6configuration တွင် FPS configuration နှင့်နောက်ဆုံး build version တို့ပါဝင်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်း CS 1.6XTCS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှအကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအာမခံသည်။
XTCS ရှိဇာတ်ကောင်များ Counter-Strike 1.6 နောက်ဆုံးဖြန့်ချိ
dual-protocols များနှင့်အတူလိုင်း (48 + 47)
နောက်ဆုံးပေါ် sXe ထိုးထားသောလေကြောင်းကာကွယ်ရေးနှင့်လိုက်ဖက်သည်
နောက်ဆုံးပေါ်ပါရှိသည် CS 1.6စက်ရုပ်များ
အဟောင်း Fixed နှင့်သစ်ကို installer ကိုလက်တွေ့အသံထဲမှာထည့်သွင်းခဲ့သည်
နှေးကွေးသော hacking အတွက်ကိရိယာများပါဝင်သည်
၁၀၀% သန့်ရှင်းသော Steam GCFs မှထုတ်ယူခြင်း (Game Cache Files)
နားထောင်ခြင်းဆာဗာကို LAN စနစ်ဖြင့်စတင်ရန်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်
ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည် Counter-Strike 1.6မြေပုံများ
Counter Counter 1.6 XNUMX WARZONE MODE
အခမဲ့ download လုပ်ပါ counter-strike 1.6 စစ်ဇုန်:
Counter-strike 1.6Warzone ကိုပိုင်ရှင်၊ Valve မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည် Counter-Strike franchise သည်အခြားဗားရှင်းများနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည် Counter-Strike 1.6မရ။ CS: warzone မှာအခြေခံသဘောတရားရှိတယ် CS 1.6 ဒါပေမယ့်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ resolution နဲ့ဂရပ်ဖစ်တွေနဲ့ ၎င်းသည်နောက်ထပ်စစ်ရေးပြုပြင်မွမ်းမံမှုနှင့်အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသည်။ ဖြန့်ချိပြီးကတည်းကလူတွေကသေနတ်သမားကစားရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ် CS 1.6 Warzone ။ Counter-Strike 1.6 Warzone ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ website csdownload.net မှစာမျက်နှာ၌ပေးထားသော link နှင့် download လုပ်နိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ download ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် CS 1.6 free Warzone အထက်ရှိ warzone ခလုတ် CS 1.6 .exe ဖိုင်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါလိမ့်မည်။ သင် Warzone အခမဲ့ download ပြီးမြောက်သည် CS 1.6 မည်သည့်အမှားများနှင့်ပြဿနာများမရှိဘဲ၎င်းကိုသင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ပေးထားတဲ့ link ပါ CS 1.6 Warzone free သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ကြော်ငြာများ၊ ဂိမ်းကစားခြင်းများနှင့်အခြားဖျက်မှုအစီအစဉ်များမှသင့်ကိုကာကွယ်ပေးသောအပြည့်အ ၀ အလုပ်လုပ်ပြီးလုံခြုံသည်။
အင်္ဂါရပ်များ CS 1.6စစ်နယ်မြေ
အတူအလုပ်လုပ်ပါ windows 7, 8, 10, XP, Vista;
Installationstorlek 177 MB ။
100% စင်ကြယ်သောဂိမ်း cache ဖိုင်များကို။
Dual protocol servers များ (48 + 47) ကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်
သူတို့ကိုထည့်ပါ နောက်ဆုံး cs 1.6စက်ရုပ်များ;
နောက်ဆုံးပေါ် AMX Mod X v1.8.2 ပါရှိသည်။
CSGO ကို download လုပ်ပါ
ဒေါင်းလုပ် Counter-Strike 1.6 CS: GO mod ကြော်ငြာရှင်
Counter-Strike 1.6 CS: GO mod သည်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် CS 1.6 အဲဒီမှာဂိမ်းတွေ CS 1.6 ကစားသမားတွေအတွေ့အကြုံရနိုင်ပါတယ် Counter-Strike: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ်ကစားနည်း ဤအထူး mode သည် CS: GO နှင့်တူပြီး၎င်းနှင့်အလုပ်လုပ်သည် Counter Strike 1.6မရ။ ၎င်းကို main game မှပုံစံများ၊ မြေပုံများ၊ အသံများ၊ အရေခွံများ၊ spoilers များနှင့် textures များဖြင့်တည်ဆောက်သည် Counter-Strikeသတ်မှတ်ချက်နိမ့်သောကွန်ပျူတာများအားလုံးတွင်အကောင်းဆုံးအမြင်အတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်ရန် GO ။ အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည် CS 1.6 CS: GO ကိုရှာဖွေရန်နှင့်အကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲသော GO
အခမဲ့ Counter-Strike 1.6 CS: GO download သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်တိုက်ရိုက်ပေးသော link မှတဆင့်၎င်းကို download လုပ်နိုင်သည်။ မင်းငါတို့ရဲ့ website မှာ download disk 1.6 CS: GO ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုမင်းမြင်နိုင်သလိုပဲအဲဒါကိုကလစ်ပြီးဒီနေ့မင်းရဲ့ဂိမ်းကိုအခမဲ့ရယူပါ။
လိုအပ်ချက်များအတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Counter-Strike 1.6 CSGO အနည်းဆုံးစနစ်
ဗီဒီယိုဘောင်များအတွက် 64 MB မှတ်ဉာဏ်
2GB disk lag
ဤ mod တွင်တည်းဖြတ်ထားသည် CS 1.6CS: GO နှင့်ဆင်တူသောပုံစံများ
ဤတည်းဖြတ်ထားသော mod တွင်ဂိမ်း၏ Global Offensive version မှတူညီသောအသံပါရှိသည်။ ရေဒီယို၊ လက်နက်အသံ၊ အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (မြေပုံအသံများစသည်ဖြင့်)
CS: GO ဂီတကိုအစမှာပြတယ်
ယခုထုတ်ဝေမှုတွင် CS: GO နှင့်ဆင်တူပြီးပြင်ဆင်ထားသည့်မြေပုံများရှိသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ဂိမ်းရှိစံပြမြေပုံများအားလုံးတွင်ရှိသည် (de_dust2, de_inferno, cs_assault, etc)
ဂိမ်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများသည်ပြောင်းလဲသွားပြီးအခြေခံအားဖြင့် CS: GO ဗားရှင်းနှင့်ဆင်တူသည်
CS: လက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များရောင်းဝယ်ရေးအတွက် GO menu
operating system အားလုံးနှင့်အလုပ်လုပ်သည်
Counter-strike ၎င်းသည်သမိုင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးပထမ ဦး ဆုံးသေနတ်သမားအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရှည်လျား။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးထူးခြားသောဂိမ်းသမိုင်းရှိသည်။ ဇာတ်လမ်းအများစုကိုမင်းမသိတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် Counter-strikeတစ်ချိန်လုံးကစားခဲ့ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကစားသမားတစ် ဦး အနေနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည် Counter-strike ပြီးပြည့်စုံသော scripted တစ်ခုမှကစားသမားတစ် ဦး ၏ကောင်းမှုသည်အချိန်တိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံး၊ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူမှုအများဆုံးနှင့်အဖွင့်ကစားဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုမှလျင်မြန်စွာထွက်သွားသည်။ ၎င်းသည် beta ဗားရှင်း ၁၇ ခုသို့ယူခဲ့သည်မှာကြည်လင်ပြတ်သားသောအမှန်တရားဖြစ်သည် Counter-strike ဂိမ်းလောကတွင်လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ရှင်သန်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဟောင်းသောကစားနည်းဖြစ်သော်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားများနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသောလူများကကစား။ ပျော်ရွှင်နေဆဲဖြစ်သည် Counter-strike.
အစ av ဂိမ်း:
၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ လွန်ခဲ့သော ၂၁ နှစ်ခန့်က Valve ပူးပေါင်းမှုသည် Half-Life ဟုခေါ်သောပထမ ဦး ဆုံးလူသေနတ်သမားကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Valve Corporation သည်ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် Counter-Strikeမရ။ The American Company သည်ကွန်ပျူတာဂိမ်းများကိုထုတ်ဝေသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ Sierra Studios သည်ကြီးမားသောပေါက်ကွဲသံနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများသည်ဂိမ်းကိုနှစ်သက်ခြင်းမှရပ်တန့်ခဲ့သည်။ Counter-Strike သည်ကစားသူများအကြားအလွန်လျင်မြန်စွာလူကြိုက်များလာခဲ့ပြီးအသိုင်းအ ၀ န်းတစ်ခုလုံးကတိုးတက်လာခဲ့ပြီး programmer များသည်တစ် ဦး ချင်း mods များကိုစတင်ခဲ့သည်။
ကနေဒါပရိုဂရမ်မာ Minh Le နှင့်သူ၏သူငယ်ချင်း Jess Cliffe တို့သည် Half-Life mod ၏ beta ဗားရှင်းကိုဖန်တီးသည်၊ Counter-Strikeမရ။ Half-Life ၏ပထမ beta ဗားရှင်းကိုတီထွင်ရန်၎င်းတို့အား coding ၏တစ်လနှင့်တစ်ဝက်ကြာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Le နှင့် Jess Cliffe တို့သည် beta ဗားရှင်းများထုတ်လုပ်ရန်ရုန်းကန်ရင်း ဆက်လက်၍ CS အတွက် website တစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်မြေပုံလေးခုနှင့်လက်နက်ကိုးခုသာရှိသည် Counter-Strikeဒါပေမယ့်နာမည်ကြီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ရှိတုန်းဘဲ။ လူများသည်အကြမ်းဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်ရန်ဖြစ်စေရွေးချယ်သော 5v5 ချီတက်ပွဲများကိုကစားခဲ့ကြပြီးယနေ့ထိဤအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Counter-Strike ပိုအာရုံစိုက်ပြီးလူတွေကဂိမ်းကိုမချစ်တော့ဘူး။
အဆို့ရှင် web i:
ကျော်ကြားမှုများကြောင့်ဖြစ်သည် Counter-Strike ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်ပဉ္စမမြောက် beta ကိုဖြန့်ဖြူးပြီးနောက် Le နှင့် Cliffe သည်လူထုနှင့်တည်ဆောက်ထားသော modder-capture video game developer များ Valve အားနှစ်နှစ်ကြာအောင်ဖမ်းစားခဲ့သည်။ Counter-Strike programmer Minh Le နှင့် Jess Cliffe တို့သည် Valve တွင်စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ Counter-Strike ၂၀၀၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် PC အတွက်နောက်ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် Counter-Strikeစီးရီး။
ပထမဆုံးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Counter-Strike နာမည်ကျော်မြေပုံနှစ်ခု၊ Assault (cs_assault) နှင့် Cobblestone (de_cabble) တို့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုကုန်းပေါ်တွင်သာကစားခဲ့သည်။ mod တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းတွင်ကြီးမားသောနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုရှိသော်လည်း PC အတွက်တန်ပြန်သပိတ်မှောက်ခြင်းတရားဝင်စီးရီးတစ်ခုစတင်ပြီးနောက်၎င်း၏ကျော်ကြားမှုသည်လူအများကြားတွင်အဆများစွာတိုးလာသည်။
၏အသိုင်းအဝိုင်း Counter-Strike လူတွေပိုပိုပြီးကစားလာကြတာနဲ့အမျှပိုပိုပြီးကြီးလာတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကစားခဲ့သည့်အခါကျော်ကြားမှုသည်ထူးခြားခဲ့သည်။ သို့သော်ကစားသူအများအပြားသည်ယခင်ကမရှိခဲ့ပါ Counter-Strike အခြားအရာဖြစ်ခဲ့ပြီးပွဲတစ်ပွဲသို့ ၀ င်ရန်လွယ်ကူခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများ (သို့) သူစိမ်းများနှင့်ဂိမ်းကစားရန်ကွန်ပျူတာရှေ့နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်မလိုအပ်ပါ။ လူတွေဟာရနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ဒါမှမဟုတ်ရက်ပိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကစားရန်ထူးခြားပြီးလွယ်ကူသောကစားနည်းဖြစ်သော်လည်းချန်ပီယံဖြစ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောစတိုင်နှင့်စိန်ခေါ်မှုသဘောသဘာဝကြောင့်၎င်းသည်ကစားသမားများကြားရေပန်းစားလာသည်။ ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ပြုလုပ်ထားသောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖန်တီးခဲ့ဖူးသမျှအလွှမ်းမိုးဆုံး multiplayer ဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာတွင်စက်ပြင်များစွာကိုတွေ့နိုင်သည် Counter-Strike အကောင်အထည်ဖော်သည်၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး၎င်း၏ကျော်ကြားမှုမှတဆင့်ဖြန့်ဝေရန်ကူညီခဲ့သည်။
ဗားရှင်းနှင့် နောက်ဆုံးသတင်းများ av Counter-Strike:
CS ၏ပြိုင်ဘက်ကင်းမှုမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်လူများကိုဆွဲဆောင်ရန်အလားအလာရှိသော developer များကဤဂိမ်းကိုလူသားများအား ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ဆွဲဆောင်မှုများပိုမိုပြုလုပ်စေသည်။ လူတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေဖြစ်လာပြီးပရိုဂရမ်မာတွေကစိတ်ကူးတွေကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်လုပ်တယ်။ Valve ကော်ပိုရေးရှင်းသည်၎င်း၏ Anti-Cheat system (VAC) ကို ၂၀၀၂ တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤစနစ်သည်လိမ်လည်ရန် (သို့) ဟက်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ကစားသူတစ် ဦး သည်ကြိုးစားပါကချက်ချင်းပိတ်ပင်ခံရလိမ့်မည်။ Valve သည်အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်အကြမ်းဖက်သမားများအတွက်မြေပုံအသစ်များနှင့်လက်နက်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်Counter-Strike ဗားရှင်း ၁.၁ ၂၀၀၃
Valve, Ritual Entertainment နှင့် Turtle Rock Studios တို့ကိုတီထွင်ခဲ့သည် Counter-Strike: Condition Zero 2004 နှင့် Sierra တို့မှကြားနာရန်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် single player နှင့် multiplayer mode များတွင်ပါ ၀ င်သောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ပရိုဂရမ်မာများသည် "The Deleted Scenes" ဟုခေါ်သောတစ်ခုတည်းသောမစ်ရှင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနှင့်အတူလိုက်လာသည်။ သူတို့သည်လည်းဂရပ်ဖစ်ကိုတိုးတက်စေသော်လည်း၎င်းသည်ညံ့ဖျင်းစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကစားသမားအများစုသည်ထိုက်တန်သည်ဟုမထင်ခဲ့ကြဘဲအမှတ်တံဆိပ်အသစ်သို့ပြောင်းရန်စိတ်မ ၀ င်စားခဲ့ပေ Counter-Strikeမူကွဲများ။ သူတို့ကဂိမ်းအသစ်မှာမပျော်ဘူး၊ အဟောင်းတွေကိုပိုကြိုက်တယ် Counter-Strike ကျော်လွန် Counter-Strike: အခြေအနေသုည အချိန်ဇယားတစ်ခုအရ Valve ၏အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Counter-Strike အဖြစ် Counter-Strikeအရင်းအမြစ်၊ နှင့် Counter-Strike: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ် 2010
အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်နှင့်မွမ်းမံမှုများထောင်ပေါင်းများစွာပြီးသောအခါအဆို့ရှင်သည်ယနေ့ကစားပွဲကိုအသွင်ပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ် Counter-Strike CS ၏အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကိုသာမကကမ္ဘာပေါ်တွင်တာရှည်ခံသောအကြိုက်ဆုံးဂိမ်းဖြစ်သည့် CS နှင့်ပရိသတ်များ၏ဆန္ဒနှင့်အညီဖြစ်စေသည်။ မူလအပြီးနှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ရှိပြီ Counter-Strike ၎င်းသည်အသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည် CS ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ဆဲဖြစ်သည်။ နည်းလမ်းတိုင်း၌၎င်းသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းတို့အကြားပြီးပြည့်စုံသောဟန်ချက်ညီသောကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Counter-strike ဂိမ်းများကိုသင်ယူရန်လွယ်ကူသော်လည်းကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။ နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကစားလိမ့်မယ်။
CS 1.6 ၎င်းသည်အက်ရှင်နှင့်စွန့်စားမှုအပြည့်ရှိသောဒဏ္legendaryာရီဆန်သောပထမဆုံးသေနတ်သမားဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အကျော်ကြားဆုံးဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Counter-Strikeမရ။ ၎င်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် Valve Corporation မှတီထွင်ခဲ့ပြီး STEAM မှဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူအများကြားတွင်လျင်မြန်စွာကျော်ကြားလာပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှသူ၏ပရိသတ်များကိုပရိသတ်များစုဝေးစေခဲ့သည်။ ၏အသိုင်းအဝိုင်း CS 1.6 တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပိုပြီးကြီးမားလာပြီးလူတွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကစားနေကြတယ်
CS သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကြီးဆုံးနှင့်အကစားဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ဒီဂိမ်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဖြန့်ချိခဲ့ပေမယ့် E-sports မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာစွဲစွဲမြဲမြဲကစားနေဆဲပါ။ သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေရှိနေသေးတယ် CS 1.6 သူတို့၏ကွန်ပျူတာ၌လူထောင်ပေါင်းများစွာကို web မှအခမဲ့ download လုပ်သည်။ ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေလည်းကျင်းပနေပါတယ် CS 1.6 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများသည်ဤပွဲများသို့တက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာကစားသမားများစွာသည်ကမ္ဘာအနှံ့နာမည်နှင့်ကျော်ကြားမှုများရရှိခဲ့သည်။
ဒါဟာအမြဲတမ်းလူကြိုက်အများဆုံးပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သေနတ်သမားအမျိုးအစားဂိမ်းဖြစ်ပြီးကစားသမားအကြမ်းဖက်အသင်း, အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်အဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်သို့မဟုတ်ပရိသတ်များဖြစ်လာရှိရာ။ အသင်းတစ်ခုစီသည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုရရှိရန်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် ၄ င်း၏တာ ၀ န်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရမည်။ ဗုံးဖောက်ခွဲရန်သို့မဟုတ်ဖောက်ခွဲရန်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တိုက်ခိုက်ရမည်၊ သို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်သမားများမှဓားစာခံများကိုလုံခြုံအောင်ထားရမည်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သည်ဗုံးတစ်လုံးသယ်ဆောင်ကာနေရာတစ်နေရာတွင်နေရာချကာဂိမ်းကိုအနိုင်ရရန်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမတိုင်မီဗုံးများကိုလက်နက်မဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အကြမ်းဖက်အုပ်စုအားတိုက်ခိုက်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်သမားများအားတိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရရန်အတွက်ကျောက်တုံးများမကျောမကျဖြစ်နေသည်။ ဓားစာခံမြေပုံများတွင်အကြမ်းဖက်သမားဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့သည်ပွဲတွင်အနိုင်ရရန်အတွက်အကြမ်းဖက်သမားကသိမ်းဆည်းထားသောအုပ်စုတစ်စုကိုကယ်တင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ အကယ်၍ သူတို့ကဓားစာခံတွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကပွဲကိုအနိုင်ရပြီးအချိန်ကုန်သွားရင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကအနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်။
သင်သိလား အဘယ်ကြောင့် CS 1.6 သည်အများဆုံးဖြစ်သည် လူကြိုက်များ ဒေါင်းလုပ် CS ဂိမ်းများလား။
CS 1.6ဗားရှင်း Counter-Strike ၎င်းတွင်၎င်းသည်အဟောင်းဗားရှင်းထက်ထူးခြားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစေသောဆွဲဆောင်နိုင်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်လူကြိုက်များသည် Counter-Strikeမရ။ ဤဗားရှင်း Counter-Strike ကစားသမား၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်အများပြည်သူအတွက်ပရိုဂရမ်မာများကအထူးတီထွင်ထားသည်။ Counter Strike တွင် multiplayer နှင့် single player modes နှစ်ခုလုံးရှိသည်။ တီထွင်သူများသည်တောက်ပသောနည်းဗျူဟာဒိုင်းများ၊ Crosshairs with Snipers နှင့် backend updates များစွာပါ ၀ င်သောအမှတ်တံဆိပ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကစားသူများသည်ဗားရှင်းအသစ်တွင်ဓားများ၊ သေနတ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ စက်သေနတ်များနှင့်ဗုံးကိုင်တွယ်ကိရိယာများအပါအ ၀ င်နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များရနိုင်သည်။ CS 1.6မရ။ ကစားသမားများသည်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်းလက်နက်များ ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာနိုင်သည်။ ဤလက်နက်များသည်တကယ့်စစ်ပွဲတွင်သုံးသောစစ်မှန်သောလက်နက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤလက်နက်များသည်အသံအေးပြီးကစားသမားများကိုစွဲမက်စေသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ၊CS 1.6 ဆေးများသည်လေးလံသောကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုမလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်လေးလံသောဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းအသေးဆုံးသတ်မှတ်ချက်များပါသောမည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်မဆိုဂိမ်းကိုလွယ်ကူစွာကစားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Microsoft Windows ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။